Liiska Kooxaha U Soo Gudbi Kara Wareega 16ka Champions League Kulamada La Ciyaarayo %
Liiska Kooxaha U Soo Gudbi Kara Wareega 16ka Champions League Kulamada La Ciyaarayo
By Ramzi Yare	 Last updated Nov 5, 2019
Lix kooxood ayaa u soo bixi kara wareega 16ka Champions League kulamada la ciyaarayo isbuuca afaraad ee wareega Group-yada, waxaana hoos ku qeexi doonaa sida ay kooxaha ku soo bixi karaan.
Kooxahee u soo gudbi kara wareega 16ka kulamada la ciyaarayo Talaadada iyo Arbacada
Atlético Madrid, Bayern München, Juventus, Manchester City, Napoli, Paris Saint-Germain
TALAADO 5ta NOVEMBER
Group E: Napoli (7 dhibcood) v Salzburg (3), Liverpool (6) v Genk (1)
Napoli ayaa soo bixi doonta haddii ay badiyaan islamarkaana Genk aysan garaacin Liverpool.
Ma jirto koox ka soo bixi karta group-ka kulamada afaraad ee isbuucaan
ARBACO 6da NOVEMBER
Paris ayaa ku soo baxda guul ama barbaro haddii Galatasaray ay garaaci weyso Madrid. PSG waxay xaqiijisan doontaa kaalinta koowaad ee Group A haddii ay badiyaan oo kulanka kale uu barbaro ku dhamaado.
Bayern ayaa ku soo baxda guul ama barbaro haddii Spurs ay garaacdo Red Star Belgrade. Bayern waxay xaqiijisan doontaa kaalinta koowaad ee Group B haddii ay badiyaan oo kulanka kale uu barbaro ku dhamaado.
Group C: Atalanta (0) v Manchester City (9), GNK Dinamo (4) v Shakhtar Donetsk (4)Man. City ayaa ku soo baxda guul, waxaana ay xaqiijisan doonaan kaalinta koowaad ee Group C haddii ay badiyaan oo ay ciyaarta kale barbaro ku dhamaato.
Juventus ayaa ku soo baxda guul
Atlético ayaa soo baxda haddii ay badiyaan oo Lokomotiv Moscow laga badiyo.
Hordhaca:Liverpool Vs Genk-Dhamaan tartamada yurub kooxda Liverpool ayaan guuldaro kala kulmin garoonkeeda Anfield